Dhageyso Wareysi: Qof Goobjooge ahaa oo si Yaab leh kaga sheekeynaya Ninkii isku Qarxiyay Baladweyne… | Badweyn.com
Dhageyso Wareysi: Qof Goobjooge ahaa oo si Yaab leh kaga sheekeynaya Ninkii isku Qarxiyay Baladweyne…
Mid ka mid ah dadkii ku sugnaa agagaarka maqaaxida shalay la weeraray ee ku taala Magaalada Baledweyne, ayaa laga wareystay weerarkaasi oo uu gaystay nin naftii hallige ahaa.
Goobjoogahan oo magaciisa ka gaabsaday, una waramay VOA, ayaa sheegay in labaatan tallaabo meel u jirto maqaaxida uu ku sugnaa xilligii uu qaraxu dhacayay. Waxaase uu qaraxa ka hor sheegay in qudhiisu uu ka mid ahaa dadkii maqaaxida fadhiyay, balse teleefanka looga yeeray, sidaana uu goobta uga kacay.
Ka hor inta aanu qaraxu dhicin, ayuu sheegay in maqaaxidu ay ahayd mid aad u camiran, oo dadkuna ay ku shaahayeen, isuna wareysanayeen, balse uu jewigu is bedelay, ka dib markii uu qaraxu dhacay.
Waxa uu sheegaya in markii uu qaraxu dhacayay uu dhulka la gariiray, isla-markaana uu daryankii qaraxa tuuray, waxa uu intaa ku daray inuu wareer qabtay, jihadiina ay ka luntay, ha yeeshee ay xaaladiisu caadi ku soo laabatay labaatan daqiiqo ka dib.
Sidoo kale ninkani, ayaa sheegaya in uu arkay meydadka afar qof oo uu ku jiro ninkii is qarxiyay iyo dhaawaca lix kale, inkastoo sida uu sheegay uu dib ka maqlay dad kale oo ku waxyeeloobay qaraxaasi.
Sida uu sheegayo dhibane-yaasha, ayaa loo qaaday Isbitaalka Guud Baledweyne, halka dadkii qabay dhaawacyada daran qaarkood loo qaaday Isbitaalka Ciidamada Amisom ku leeyihiin Baledweyne.
Ururka Al Shabaab, ayaa sheegtay masuuliyadda weerarkaasi, iyagoo sheegay inay ku dileen lix ruux, labaatan kalena ay ku dhaawaceen. Shabaabku waxay sheegeen in ay weerarka ku dileen Saraakiil iyo Shaqaale Maamulka Gobolka Hiiraan ka tirsan.